अर्थ-संवाद(Biz-Talk) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
पूर्वअर्थसचिव भन्छन्–‘बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकमको हाहाकार भयो भन्ने हल्लामात्र’
– अनन्त्य सुन्दर काठमाण्डौ । पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा भएको वित्तीय जानकार एवं अर्थविद्हरुले बताउँदै आएका छन्। समयमा सरकारको पुँजीगत खर्च नहुनु, तरलता संकट, बढ्दो ब्याजदर, महँगीलगायतले अर्थतन्त्रमा अहिले प्रत्यक्ष रुपमा असर गरेको छ। बैंकहरुमा बढ्दो ब्याजदरका साथै लगानीयोग्य रकम नहुँदा व्यवसायी,...
नेतृत्वबाटै पदको दुरुपयोग हुनु दुर्भाग्य : नेप्से सीईओ कृष्णबहादुर कार्की
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सीईओमा सरकारले कृष्णबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ। गत माघ १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्कीलाई नेप्सेको सीईओमा नियुक्त गरेको हो। सीईओ कार्कीसँग बिजशालाकर्मीले गरेको छोटो वार्तालापको सारसंक्षेप : नेप्सेको सीईओमा नियुक्त हुनुभएको छ, अब नेप्सेमा देखिएका कमीकमजोर कसरी...
भरतराज ढकाल– अध्यक्ष, मुक्तिनाथ विकास बैंक यसपालिको दसैँमा मेरो खासै नयाँ योजना छैन। दसैँ भनेपछि वातावरण आफैँ नै रमाइलो हुने गर्छ। मेरो बसाइ यहीँ काठमाण्डौको एउटा कोलोनीमा छ। तर, यसपालि मेरो टीका नभएकोले कोलोनीमै साथीभाइसँग भेटघाट गरेर सामान्य तरिकाबाट नै दसैँ मनाउने योजना छ। दसैँ यसै पनि रमाइलो हुन्छ। साथीभाइ तथा दाजुभाइ पनि भेट...
‘सही क्यालकुलेसन गर्ने हो भने नेप्से बल्ल १८०० मा पुग्दैछ, कसरी सुन्नियो ?’
-भरत रानाभाट, पूर्व अध्यक्ष: स्टक ब्रोकर एशोसिएसन पछिल्लो समयको सेयर बजारलाई तपाईले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? हामी कुन अवस्थामा छौं ? -पछिल्लोकालको बजार ११०० बाट ३२०० पुगेर फर्किएको हेर्यौं भने अहिले पनि बजार माथि र हामी राम्रो पोजिशनमा छौं । ३२०० पुगेर घटेको अवस्था हेर्ने हो भने १०–१२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बजार घटेको छ । यसरी...
चन्दन कार्की, सिद्धार्थ क्यापिटल लिमीटेडको नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत । १६ वर्षअघि सिद्धार्थ बैंकबाट बैंकिङ करिअरको सुरुवात गरेका कार्की सो बैंकमा ट्रेजरी हेडदेखि कर्पोरेट क्रेडिटमा इन्फ्रास्टक्चर फाइनान्सिङ युनिटको हेड भएर समेत काम गरिसकेका बैंकर हुन् । सिद्धार्थ क्यापिटलमै केही महिना चिफ अपरेटिङ अफिसरको रुपमा काम गरेका...
‘ठूलो आकारको बन्यौं, छुट्टै पहिचानका लागि अझै मेहनत गरिरहेका छौं’
-गणेशराज पोखरेल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लि.) सिटिजन्स बैंक छोटो समयमै सबैको नजरमा पर्न सफल भएको छ । यो कसरी सम्भव भयो ? -हामी एकैदिनमा यहाँ पक्कै आइपुगेका होइनौं । मानिसले वर्षभरि मिहिनेत गरेर परीक्षा दिन्छ र उसको सफलता वा असफलता भनेको उसको नतिजाले नै तय गर्ने गर्दछ। त्यसैगरी हामीले पनि करिब १४ वर्षदेखि...
नेपालमा सपिङ मलको भविष्य र कोभिडपछिको चुनौती
पाँच वर्षयता देशकै प्रतिष्ठित सपिङ मलहरु लबिम मल र चौधरी ग्रुपद्वारा सञ्चालित सिजी ल्यान्डमार्क मलको सुरुआती समयदेखि नै त्यसको स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने अवसरले गर्दा छोटो समयमै मैले धेरैभन्दा धेरै अनुभव र सीप हासिल गर्ने मौका पाएको छु। लसम्म हरेक दिन नयाँ–नयाँ कुरामा प्रखरता हासिल गर्दै मल व्यवस्थापनसम्बन्धी मैले सिकेका केही...
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको दाबी–‘७० प्रतिशतले हाम्रो कामको प्रशंसा गरेका छन्’
काठमाण्डौ । धितोपत्र बोर्डले मंगलबार ५१ वटा कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्दै तिनीहरुको सेयरमा लगानी जोखिमयुक्त हुने भनेपछि यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । धितोपत्र बोर्डको उद्देश्य ठीक भए पनि तरिका गलत भएको भन्नेहरु धेरै देखिएका छन् । कुनै कम्पनीमा गलत चलखेल भएर मूल्य बढाउने खेल हुन्छ भने त्यसको गोप्य रुपमा अनुसन्धान गरेर त्यस्ता...
‘नाफा हुँदा कर तिर्ने मात्र होइन, अब घाटा हुँदा पनि समायोजन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ’
-चन्द्रसिंह साउद(प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)-नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमीटेड तपाईलाई अरुबेलाभन्दा आज अलिक प्रफूल्ल मुद्रामा देखिरहेको छु? -मलाई सेयरबजारमा एकैदिन १७ अर्ब बढीको कारोबार भएर मात्र खुशी लागेको होइन । सुरुका दिनमा अनलाइन कारोबार प्रणालीको सुरुवात गर्दा अधिकांशले विश्वास गर्न सकेका थिएनन् । कतिपय मिडियाका ‘टक शो’हरुमा म...
‘अहिलेको परिस्थितिमा सेयर बजारमा लगानी सुरक्षित’
कोरोना माहामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि देशका प्रायः सबै ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कोरोनाकै कारण देशको अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको बेला सेयर बजारमा भने रौनक छाइरहेको छ। दिनदिनै सेयर बजारमा नयाँ–नयाँ रेकर्ड कायम भइरहेका छन्। बजार पुँजीकरण पनि देशको कुल ग्राहस्त उत्पादन (जीडीपी) बराबर पुग्न लागेको छ। यसले सेयर बजारमा...
एनआईबिएल समृद्धि फन्ड–२ : आउँदो वर्षबाटै लगानीकर्तालाई निरन्तर लाभांश
-सचिन्द्र ढुंगाना, सहायक महाप्रबन्धक- एनआईबिएल एस क्यापिटल एनआईबिएल एस क्यापिटलले नयाँ म्युचुअल फन्ड योजनाका इकाइहरु निष्कासन गरेको छ । यो कस्तो खालको योजना हो ? -हो, हामीले एनआईबिएल समृद्धि फन्ड २ नामको नयाँ म्युचुअल फन्ड योजनाको इकाइहरु सर्वसाधारणमा यही वैशाख १३ गते(आज)देखि १६ गतेसम्मका लागि बिक्री खुला गर्दैछौँ। हाम्रो पहिलो योजना...
काठमाण्डौ । सेयर बजारमा आममानिसको आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ। बजार उकालो लागिरहेको बेला लगानीकर्ताका गुनासा र आकांक्षाहरु पनि बढिरहेका छन्। कुनै बेला घन्टौँ लाइन लागेर प्राथमिक सेयर भर्ने लगानीकर्ताहरु हातमा बोकेको मोबाइलबाटै केही मिनेटमै आईपीओमा आवेदन दिन थालेका छन्। दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार पनि प्राविधि भित्रिएसँगै सहज र सरल...
‘फेरि लकडाउन र निषेधाज्ञा भए अर्थतन्त्र तहसनहस हुन्छ’
सतीशकुमार मोर– अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ पछिल्लो समयमा कोभिड–१९ को पहिलो चरणबाट हामी लगभग लगभग गुज्रिसेकका थियौँ। पहिलो चरणमा कोभिडका कारण विशेष गरेर निजी क्षेत्र प्रताडित भयो। अहिले फेरी कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएको आम जनमानसमा त्रास छ। देशमा बढिरहेको कोरोना संक्रमणका केसहरुले यसलाई थप बल पुर्याएको छ। यस्तोमा निजी...
ब्रोकरका अध्यक्षको अन्तर्वार्ता– ‘साउन १ देखि हाम्रै टीएमएसबाट कारोबार गर्न चाहन्छौं’
काठमाण्डौ । सेयर बजारमा सर्वसाधारणको आकर्षण अहिले निकै बढेको छ। जताततै सेयर बजारकै चर्चा चल्न थालेको छ। कोरोना महामारीका कारण अरु क्षेत्र खस्किए पनि सेयर बजार पनि उचाइमा पुगेको छ। प्राथमिक बजारदेखि दोस्रो बजारसम्म अहिले सेयर कारोबार गर्ने संख्या दिनदिनै बढ्दैछ। कारोबार थपिएसँगै ब्रोकर हाउसहरुमा पनि निकै भीडभाड देखिन थालेको छ।...
‘डिजीटल कारोबार गर्दा पैसा हराउँछ कि भन्ने अझै भ्रम छ’
सुनिल खतिवडा, दायीत्व व्यवस्थापन एवम् बाह्य मामिला प्रमुख- माछापुच्छ्रे बैंक लिमीटेड माछापुच्छ्रे बैंक डिजिटल बैंकिङको मामिलामा पहिलेदेखि नै अन्य वाणिज्य बैंकहरुको तुलनामा अग्रेसिभ देखिन्छ, पछिल्लो समय तपाईहरुले रेमिट्याप भन्ने डिजिटल सेवा ल्याउनु भयो । जुन नेपालको वाणिज्य बैंकिङ इतिहासमै पहिलो भएको भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ । यसको...